Home Wararka Dibada Xasan Sayyad Khodayi: Saddex arrimood oo ku saabsan sarkaal sare oo lagu...
Xasan Sayyad Khodayi: Saddex arrimood oo ku saabsan sarkaal sare oo lagu dilay Tehran
Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa shaacisay in sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka Iiraan “lagu dilay” magaalada caasimadda ah ee Tehran kaddib markii ay weerar la beegsadeen labo nin oo hubaysan. Dhacdooyinka noocan ah ayaa si dhif ah uga dhaca dalkaas.
Wararka ayaa sheegaya in labo nin oo mooto saaran ay toogasho ku dileen Kornayl Xasan Sayyad Khodayi, xilli uu ku jiray gaarigiisa oo yaalla afaafka hore ee girigiisa magaalada Tehran.
Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda dilka Khadayei, oo ah sarkaalkii ugu sarreeyay ee la dilo tan iyo wixii ka dambeeyay markii la khaarijiyay seynisyahankii caanka ahaa ee nuclear-ka Iiraan, Mohsen Fakhrizadeh, oo la dilay dabayaaqadii sanadkii 2020-kii.
Taliska ciidanka kacaanka Iiraan ayaa dilka Khodaye ku tilmaamay “fal argagixiso”, iyagoo mas’uuliyaddiisana ku eedeeyay qolyo “lala xiriiriyo kibirka caalamka”, kuwaasoo laga yaabo inay ula jeedaan Mareykanka iyo xulafadiisa.
Taliska Ciidamada Kacaanka Iiraan ayaa bayaan ay boggooda internet-ka soo dhigeen ku sheegay in Khodaei lagu dilay weerar gaadmo ah oo ay fuliyeen labo nin oo ku beegsaday waddada Mujahideen Islam ee hor marta gurigiisa.
Wakaaladda Wararka rasmiga ah ee Iiraan ayaa tebisay in Khodaei uu ku geeriyooday rasaas shan xabadood ah oo lagu dhuftay xilli uu gurigiisa ku laabanayay abaare 4pm galabnimo ee waqtoga maxalliga ah.
Waxay Wakaaladdu shaacisay sawirro muujinaya nin gaari cad ku dhex jira oo uu uu dhiig uga yaallo kulleetiga shaatiga iyo garabka.
Sida ka muuqata sawirka, toogashadu waxay uga timid dhanka muraayadda daaqadda kursiga hore ee shirka ee uusan darawalku fadhinin.
Kacaanka ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaan lagu ogaanayo “cidda gardarrada samaysay” Wakaaladda Wararka ee Fars-na waxay tebisay in dacwad oogaha guud uu booqday goobta uu dilka ka dhacay, uuna amar ku bixiyay “in si deg deg ah loo aqoonsado loona soo xiro dadkii ka dambeeyay fal dambiyeedkaas”.
Waa kuma ninka la dilay
Dowladda Iiraan ayaa ninkan ku tilmaantay “ilaaliyaha goobta barakaysan”.
Taliska Kacaanka Iiraan ayaa Khadayi ku tilmaamay inuu mid difaaca danaha Iiraan. Magaca lagu qeexay ayaa loo adeegsadaa qof walba oo Iiraan uga shaqeeya arrimaha Suuriya iyo Ciraaq.
Teleefishinka ku hadla afka xukuumadda Tehran ayaa sheegay in Khodaye uu ahaa nin aad looga yaqaanno Suuriya, inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah kasii
Iiraan ayaa saamayn wayn ku leh dalka Ciraaq, halkaas oo ay sheegto inay ku leedahay “la-taliyeyaal militeri” oo ay shaqadoodu tahay inay tababarro u sameeyaan ajaanibta “isxilqaamay”.
Dowladda Islaamiga ah ayaa sidoo kale xulafo wayn la ah Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, waxa ayna dowladdiisa ka caawisay dagaalka sokeeye ee dalkaas ka socda muddo ka badan 11 sano.
Shabakad Israa’iil ah
Maalintii Axadda, Wakaaladda Wararka ee ISNA, oo laga leeyahay Iiraan, ayaa shaacisay in gacanta lagu dhigay shabakad sirdoon oo ay Israa’iil ku leedahay gudaha Iiraan. Waxay sidoo kale sheegtay in la xiray xubno halkaas ka howl galayay.
Hase yeeshee ilaa hadda ma cadda in xarigga la sheegay uu xiriir la leeyahay dilka Khodaye.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo dhacdooyinka laga soo tebiyay magaalada Tehran, halka warbaahinta maxalliga ah ee Israa’iil ay kornaylka la dilay ku sheegeen inuu mas’uul ka ahaa “dilal lagu bartilmaameedsaday dad reer Israa’iil ah”.
Bishii April ee lasoo dhaafay, booliska Iiraan ayaa bayaan ay shaacisay Wakaaladda Wararka ee Fars ku shaaciyay in ay xireen “saddex ka mid ah sirdoonka Israa’iil”.
Khodayi ayaa noqonaya sarkaalkii labaad ee ugu sarreeyay kacaanka Iiraan ee la dilo muddo dhowr sano ah gudahood.
2020-kii ayaa la dilay taliyihii ugu awoodda badnaa militeriga Iiraan, oo lagu magacaabi jiray Qaasim Sulaymaani.
Bishii November ee sanadkii 2020-kii ayaa Tehran lagu dilay seynisyahankii madaxa u ahaa barnaamijka nuclear-ka Iiraan, Mohsen Fakhrizadeh
Tan iyo sanadkii 2010-kii, ugu yaraan lix ka mid ah seynisyahannada iyo aqoonyahannada Iiraan ayaa la weeraray ama la dilay, falalkaas badankoodna waxaa gaystay dad ku socday mootooyin.
Previous articleZelenesky: Ukraine waxay weli baadigoobeysaa nidaamka gantaalaha ee MLRS
Next articleHub Culus: Imisa waddan ayaa heysata hubka niyukliyeerka, meeqa xabo ayaase taalla adduunka?
Xog: Isbadalka xilalka ee Xasan Sheekh uu wado oo qeyb ka...
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhaw gaaray Magaalada Beydhabo